सभामुखको न्युज ब्रेक गर्ने पत्रकारले भने : सुरक्षा थ्रेट बढ्याे - Purbeli News
सभामुखको न्युज ब्रेक गर्ने पत्रकारले भने : सुरक्षा थ्रेट बढ्याे
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन १६, २०७६ समय: ११:५२:५६
ईटहरी । केही दिनयता एउटा समाचारले नेपाल लगायत अन्य देशमा समेत ठुलै तरंग सिर्जना गरेको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसद सचिवालयमा काम गर्ने एकजना महिला कर्मचारीलाई उनकै कोठामा गएर जबरजस्ती बलात्कार गरेको ती महिलाले आरोप लगाएपछि यतिबेला नेपालमा ठुलै तरंग सिर्जना भएको छ ।
सोही घटनापछि सभामुख महराले राजीनामा समेत दिईसकेका छन । ती महिलाले आफु पिडित भएको भन्दै पत्रकार सामु दिएको बयान समेत फेरीसकेकी छिन । उनले आफुले महरालाई बाबु समान मान्ने र उहाँलाई लगाएको आरोप गलत भएको बरु पत्रकारले उल्टै आफुले भनेको कुरा बंगाएर प्रस्तुत गरेको भन्दै रोष प्रकट गरिरहेकी छिन । यसै सन्र्दभमा सोही समाचार र भिडियो अन्तरबार्ता पहिलोपटक प्रकाशन गर्ने पत्रकार अजयबाबु शिवाकोटी सँग हामीले घटनाका सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरेका छौँ । शिवाकोटी सँग पूर्वेली न्यूजका लागी गरिएको कुराकानीका सम्पादित अंशहरु :
तपाइले ब्रेक गर्नु भएको समाचारले सभामुख राजीनामा दिन बाध्य हुनु भयो तर पीडित भनिएकी महिलाले तपाइमाथि समाचार तोडमोड गरेको आरोप लगाउनुभयो नी ?
उनले मलाइ देखाएका प्रमाणका आधारमा उनी पीडित रहेको अनुभूति भएपछि यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्छ भनेर यस घटनालाई बाहिर ल्याएको हो । उनले ठुलो दबाब र प्रभावमा पछि बोली फेरेको हुनसक्छ । पीडित भनिएकी महिला वास्तवमा पीडित नै हुन उनको शारीरिक अवस्था र अन्य प्रमाणले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।
अजयबाबु शिवाकोटी (पत्रकार)
देशको राजनीतिमा नै तरङ्ग आउने समाचार ब्रेक गर्नु भएको छ , आफूलाई कति सुरक्षित महसुस गर्नु भएको छ ?
पक्कै पनि देशमा यति ठुलो तरङ्ग आउने समाचार सार्वजनिक गर्दा सुरक्षा चुनौति हुन्छ नै । मैले र परिवारले पनि यो सुरक्षा चुनौतिको महसुस गरेका छौँ । नेकपा निकटका केही ब्याक्तिहरूले मलाइ तह लगाउने योजना बनाएको सूचना पनि प्राप्त गरेको छु । तत्कालीन सभामुखमा छोराहरूले हतियार सहितको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै डरको र भयको अवस्था सिर्जना गर्न खोज्नु भएको छ ।
तपाइलाई समाचार प्रकाशन गर्नु पूर्व समाचार रोक्न कति सम्मको दबाब आयो ?
समाचार प्रकाशन गर्नुपूर्व निक्कै धेरै दबाबहरू आएका थिए । तत्कालीन सभामुख निकटका व्यक्तिले बारम्बार समाचार रोक्न दबाब दिइरहनुभयो । तर मैले समाचार रोक्न नमिल्ने र महिला पीडित भएकाले यसलाई सार्वजनिक गर्नै पर्ने जवाफ दिए । समाचार रोक्न त तत्कालीन सभामुख महराबाट पनि दबाब आएको हो । ती महिलाले आरोप लगाएपछि सभामुख महरालाई तपाइ माथि यति ठुलो आरोप लागेको छ भनेर कुरा राख्दा उहाँले अहिले यो समाचार सार्वजनिक नगर्नुहोस, कर्मचारी समायोजनमा चित्त नबुझेर त्यो आरोप लगाइन होला म पछि कुरा गर्छु भन्ने जवाफ आयो ।
कतै ती महिलाले तपाइसँग बेहोसमा त कुराकानी गरेकी थिइनन् ? कुराकानी गर्दा तपाइले कतै त्यस्तो महसुस गर्नु भएन ?
ती महिला पुरा होसमा नै थिइन । ती महिलाले दिएको लोकेसनले नै म उनको घर सम्म पुगेको हो । अनौपचारिक गफमा उनले पटक पटक आँशु झारेकी छन् । आफू सभामुखबाट नै अन्यायमा परेकाले केही उच्च स्तरीय नेतालाई जानकारी गराएको तर कसैले पनि कुरा नसुनेपछि मिडियामा आएको बताएकी छिन् । सभामुखका छोरालाई म्यासेज पाठएकी छन् । यस्तो मान्छे कसरी बेहोसी हुन सक्छ ।
केही घण्टामा नै ती महिलाको बोली फेरिनु पछाडिको कारण केहो जस्तो लाग्छ ?
ठुलो दबाब र प्रभावमा उनले आफ्नो बोली फेरेकी हुन । उनलाई पारिवारको प्रयोग गरी ठुलै दबाब दिएको हुन सक्छ । केही समय ती महिला फोन अफ गरेर बेपत्ता भएकी थिइन त्यो समय उनी कहाँ गइन वा कहाँ लगिएको थियो , त्यस बिचमा उनलाई कति दबाब बा प्रभावमा पारियो यसले पनि बोली फेरिनुमा ठुलो अर्थ राख्छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दम्भ र बलमा यस घटनालाई मोड्न खाजिदैछ त्यसले यसमा सबै सचेत हुन आवश्यक छ ।
यो घटनालाई जसरी मोड्न खोजिएको छ त्यो गलत छ । यसलाई विभिन्न बहानामा मिलाउने भन्दा पनि कानुनी उपचार खोज्जु नै उपयुक्त हुन्छ । सभामुख महरा, उहाँको परिवार र शुभचिन्तकलाई हतार नगर्न र संयम हुन अनुरोध गर्दछु ।
जिग्री-पाँडेविरुद्ध उजुरी, कारण यस्तो
दबाब र धम्कीसँगै बलात्कार पीडित अदालतमै बेहोस